Jizọs Bụ “Achịcha Na-enye Ndụ” | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
JIZỌS BỤ “ACHỊCHA NKE SI N’ELUIGWE BỊA”
Mgbe Jizọs nọ n’ebe ọwụwa anyanwụ nke Oké Osimiri Galili, ọ rụrụ ọrụ ebube nyejuo ọtụtụ puku mmadụ afọ. Ma, mgbe ha chọwara ime ya eze, ọ gbapụrụ. N’abalị ụbọchị ahụ, ọ gara ije n’elu oké osimiri mgbe ebili mmiri na-eme ma napụta Pita, bụ́ onye gakwara ije n’elu mmiri ma malite imikpu mgbe o nwewere obi abụọ. Jizọs mekwara ka oké ifufe dajụọ. Ọ ga-abụ na ihe a o mere mere ka ụgbọ ndị na-eso ụzọ ya ghara ikpu.
Ugbu a, Jizọs alọghachila Kapaniọm, nke dị n’ebe ọdịda anyanwụ Oké Osimiri Galili. Ndị ahụ ọ rụrụ ọrụ ebube nyejuo afọ chọtara ya ma jụọ ya, sị: “Olee mgbe i ji rute ebe a?” Ma, Jizọs baara ha mba, sị ha na ihe mere ha ji na-achọ ya bụ ka ya nyekwa ha nri ọzọ. Ọ gwara ha, sị: “Rụọnụ ọrụ, ọ bụghị iji nweta nri nke na-ala n’iyi, kama iji nweta nri na-adịgide adịgide nke na-eduga ná ndụ ebighị ebi.” Ha jụziri ya, sị: “Gịnị ka anyị ga-eme iji rụọ ọrụ Chineke?”—Jọn 6:25-28.
Ha nwere ike ịna-eche na Jizọs ga-agwa ha banyere ọrụ ndị e dere n’Iwu ahụ. Ma, Jizọs gwara ha banyere ọrụ kacha mkpa ha ga-arụ. Ọ sịrị ha: “Nke a bụ ọrụ Chineke, ka unu nwee okwukwe n’onye Onye ahụ zitere.” Ma, ndị ahụ enweghị okwukwe na Jizọs n’agbanyeghị ihe niile Jizọs merela. Ha gwaziri Jizọs ka o meere ha ihe ịrịba ama ka ha nwee ike inwe okwukwe na ya. Ha jụrụ ya, sị: “Olee ọrụ ị ga-arụ? Nna nna anyị hà riri mana n’ala ịkpa, dị nnọọ ka e dere, sị, ‘O nyere ha achịcha si n’eluigwe ka ha rie.’”—Jọn 6:29-31; Abụ Ọma 78:24.
N’ihi arịrịọ a ha na-arịọ ka Jizọs meere ha ihe ịrịba ama, Jizọs gwara ha Onye ọrụ ebube ndị ahụ si n’aka. Ọ sịrị ha: “Ana m asị unu, ọ bụghị Mozis nyere unu achịcha ahụ si n’eluigwe, kama ọ bụ Nna m nyere unu ezi achịcha nke si n’eluigwe. N’ihi na achịcha nke Chineke bụ onye ahụ nke si n’eluigwe bịa, nke na-enyekwa ụwa ndụ.” Ma, ha aghọtaghị ihe Jizọs na-ekwu. Ha rịọwaziri ya, sị: “Onyenwe anyị, na-enye anyị achịcha a mgbe niile.” (Jọn 6:32-34) Ma, olee “achịcha” Jizọs bu n’obi?
Jizọs kọwaara ha, sị: “Abụ m achịcha na-enye ndụ. Onye na-abịakwute m, agụụ agaghị agụ ya ma ọlị, onye nwekwara okwukwe n’ebe m nọ, akpịrị agaghị akpọ ya nkụ ma ọlị. Ma agwawo m unu, sị, Unu ahụwo m ma unu ekweghị. . . . Esi m n’eluigwe bịa ime, ọ bụghị uche m, kama uche onye zitere m. Nke a bụ uche nke onye ahụ zitere m, na agaghị m atụfu ihe ọ bụla n’ime ihe niile o nyere m kama na m ga-akpọlite ya n’ọnwụ n’ụbọchị ikpeazụ. N’ihi na nke a bụ uche Nna m, na onye ọ bụla nke na-ahụ Ọkpara ahụ ma nwee okwukwe na ya ga-enwe ndụ ebighị ebi.”—Jọn 6:35-40.
Ihe a Jizọs kwuru mere ka ndị Juu wewe iwe, ha amalitekwa ịtamu ntamu megide ya. Ha nọ na-eche ihe mere ọ ga-eji asị na ya bụ “achịcha nke si n’eluigwe bịa.” (Jọn 6:41) Ha weere Jizọs ka mmadụ nkịtị nne na nna ya si na Nazaret nke dị na Galili. Ha jụwara, sị: “Onye a ọ́ bụghị Jizọs nwa Josef, onye anyị maara nna ya na nne ya?”—Jọn 6:42.
Jizọs zara ha, sị: “Kwụsịnụ ịtamu ntamu n’etiti onwe unu. Ọ dịghị onye pụrụ ịbịakwute m ma ọ bụrụ na Nna m, bụ́ onye zitere m, adọtaghị ya; m ga-akpọlitekwa ya n’ọnwụ n’ụbọchị ikpeazụ. E dere n’akwụkwọ ndị amụma, sị, ‘Ha niile ga-abụkwa ndị Jehova kụziiri ihe.’ Onye ọ bụla nke nụrụ ihe site n’ọnụ Nna m ma mụta ihe na-abịakwute m. Ọ bụghị na ọ dị mmadụ ọ bụla hụworo Nna m, ma e wezụga onye ahụ nke si n’ebe Chineke nọ; onye a ahụwo Nna m. N’ezie, n’ezie, ana m asị unu, Onye kweere nwere ndụ ebighị ebi.”—Jọn 6:43-47; Aịzaya 54:13.
Mgbe Jizọs na Nikọdimọs nọ na-akparịta ụka, Jizọs gwara ya na ihe ga-eme ka mmadụ nweta ndụ ebighị ebi bụ ma onye ahụ nwee okwukwe n’ebe Nwa nke mmadụ nọ. Ọ sịrị ya: “Ka e wee ghara ibibi onye ọ bụla nke nwere okwukwe [n’Ọkpara Chineke mụrụ naanị ya], kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.” (Jọn 3:15, 16) Ugbu a Jizọs na-agwa ọtụtụ ndị okwu, ọ gwakwara ha ihe gosiri na ọ bụ n’aka ya ka ha ga-esi nweta ndụ ebighị ebi, bụ́ nke mana ahụ e nyere ndị nna nna ha na achịcha ndị a na-eme na Galili na-agaghị enyeli ha. Oleezi otú ha ga-esi nweta ndụ ebighị ebi? Jizọs kwughachiri ihe ahụ o kwuru ọzọ. Ọ sịrị: “Abụ m achịcha na-enye ndụ.”—Jọn 6:48.
Jizọs kọwakwuru ihe ndị ọzọ banyere achịcha a sí n’eluigwe mgbe ọ na-akụzi ihe n’ụlọ nzukọ dị na Kapaniọm.
N’ihi ihe ndị Jizọs mere n’oge na-adịbeghị anya, gịnị mere ndị mmadụ ekwesịghị ịgwawa ya ka o meere ha ihe ịrịba ama?
Olee ihe ndị Juu mere mgbe Jizọs sịrị na ya bụ ezi “achịcha nke si n’eluigwe”?
Gịnị mere achịcha ahụ Jizọs kwuru banyere ya ji karịa mana ma ọ bụ achịcha nkịtị?
mailto:?body=Jizọs Bụ “Achịcha Na-enye Ndụ”%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1102014657%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Jizọs Bụ “Achịcha Na-enye Ndụ”